Sogok & Perut Buncit
Interview with Mufti Noor Mohamad @ Sayar U Ko Lay at Sky Net Channel
Bertil Lintner: “The violence is clearly well orchestrated and not as spontaneous as we are being led to believe.”
Najib Diharamjadahkan: RM20 Juta Pinjam Panda, Rakyat Berikan Nama "Cin Cin" & "Beg Beg"
Report from Asia News (Protest In Malaysia)
U Wirathu is summoned by the Myanmar Monk authorities
Girls’ Generation (SNSD) Paparazzi
[IKTIBAR] Kepala Tersepit Bawah Kereta
Marching Toward Myanmar Embassy (Part 2)
Protest at Myanmar Embassy 15.6.12
မီဒီယာက ခင်ဗျားတို့ကို ဘာတွေချ မပြဘူးလဲ
ပဉ္စသိင်္ခ့ စောင်းကြိုးပြတ် (အပိုင်း ၁)
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted: 15 Jun 2012 11:17 AM PDT
Posted: 15 Jun 2012 10:53 AM PDT
"Jadi kita kena cegah kemungkaran itu dengan tangan atau cegah dengan mulut macam yang saya bercakap ini atau cegah dengan hati. Itu selemah-lemah iman kita," jelasnya di hadapan hampir 400 hadirin. -HD
"Tapi apa yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan diri saya sendiri serta dua orang anak-anak saya.
"Prinsip saya mudah, saya akan menolak mana-mana yang tak betul, perjuangan sekular, banyak kemungkaran yang berlaku di hadapan kita yang wajib kita tentang,"ujarnya.
"Pengalaman yang berlaku selama ini boleh kita membawanya ke pentas untuk dikongsi bersama masyarakat, tidak ada salahnya asalkan ianya baik untuk Islam,"ujarnya.
Posted: 15 Jun 2012 08:00 AM PDT
Assalamualaikum & Salam To All,
Sogok, apa itu sogok? dan buncit apa itu buncit? kedua perkara ini seiringan sebenarnya, kalau tak kene sogok, maka adakah perut akan buncit? makan duit haram atas kepayahan orang lain, itu namanya makan duit haram jadah, akibatnya perut buncit, lebih teruk lagi makan dengan anak bini sekali, itu yang akan menyebabkan perut yang dulu ramping menjadi macam busut, penuh dengan dosa.
Ada kalangan perkhidmatan dalam negara ni memang memerlukan sogokkan atau perkataan lebih manis iaitu rasuah, duit haram yang menjadi tuhan di mata segelintir manusia, kalau x sogok, maka tak jadi la sesuatu benda tu, jika inginkan projek berjuta ringgit, maka rasuah yang menjadi bidaan tertinggi akan mendapat projek tersebut, jika ingin mendapatkan kerja yang baik, sogok baru boleh dapat kerja, kalau inginkan kelulusan segera bagi sesuatu perkara itu, sogokkan menjadi aset penting bagi sesetengah manusia tersebut, diorang tak kisah jika makan duit haram tu, janji untung berlipat kali ganda, kalau tak makan duit haram ni, badan diorang akan menjadi lemah, haha...
Ada sesetengah perkara itu perlukan sogokkan, kalau tak sogok tak dapat nak lulus segera, kalau tak sogok selagi tu kita di kerjakan, selagi tu jadi hamba orang, jadi babu orang, tapi harus di ingat, tuhan ada dimana-mana, maha melihat dan maha mengetahui, azabnya cukup dasyat, tapi manusia mudah alpa, ini bukan cerita kosong, ini apa yang terjadi pada masa sekarang, pasal duit semua boleh settle bro, takde duit lu pergi mampos, siapa nak tolong lu tanpa ringgit, rupiah tak main.
Tapi mana-mana negara pun rasuah ni tetap ada, aku pun dah pernah melaluinya dahulu, tak kisah lah, kalau bukan sogok dengan duit, dengan benda lain pun boleh gak, bukan nak cerita dan ngomong kosong, ini benar-benar terjadi, semua bangsa pun ada melakukan benda terkeji ni, kadang-kadang bukan yang gaji kecil selalu makan rasuah, pangkat datuk-datuk pun makan duit haram ni, makan duit atas keuntungan orang lain tanpa titik peluh sendiri, itu di kira duit haram juga, 1% ke hingga 100% ke, haram tetap haram.
Kalau tak sogok, boleh fail test, kalau dah sogok, tentu boleh lulus bang, haha, sogok duit, sogok tenaga, sogok body pun boleh bang, janji abg settlekan yer......haha, sial, pasal benda kecil pun nak sebat duit orang, rm10 ringgit pun nak sebat dan makan duit orang, korang paham-paham je dah le yer.....
Makan duit haram ni boleh, tapi lepas makan kentut tu bau macam bangkai, perut tu membusung macam sarang anai-anai, tunggu kasi pecah je tentu jalan, makan duit mcm ni tak selamat bro, tunggu kat neraka kita cerita ok bro......zas.............
p/s duit sogok ni datangnya dari perkataan apa eh? hahaha....
Posted: 15 Jun 2012 07:08 AM PDT
BY Edward LoxtonLAST UPDATED AT 07:49 ON Tue 12 Jun 2012
CHIANG MAI – As sectarian violence continues unabated in Burma's westernmost state of Arakan, suspicion is growing that the clashes between Buddhists and minority Muslims are part ofagovernment plot to discredit the hugely popular opposition leader Aung San Suu Kyi and weaken the threat she poses to its military-backed power base.
"The violence is clearly well orchestrated and not as spontaneous as we are being led to believe," said Burma expert and author Bertil Lintner, whose latest book, Great Game East, is about to be published. The book deals with "the power play in the eastern border regions of the Indian subcontinent".
In pictures: Ethnic violence erupts in Burma's Rakhine province
Religious and racial tensions have always run high in this backward state - known in Burmese as Rakhine – where the Rohingya minority are denied many basic rights, even Burmese citizenship. Hundreds of thousands of Rohingya, most of them men, have fled, either overland to neighbouring Bangladesh – where they are classed as illegal immigrants – or even in open boats to Thailand and Malaysia.
"The answer is plain to see," Lintner told The Week. "The government is very worried about the support commanded by Suu Kyi. It wants to force her intoaposition where she has to makeapro-Rohingya public statement that could damage her popularity among Burma's Buddhists, where anti-Muslim sentiment runs high. On the other hand, if she remains silent she will disappoint those who support her firm stand on human rights."
A long-time observer of the Burma scene, who requested anonymity, agreed. "Suu Kyi is damned if she does and damned if she doesn't," he said. "She is inavery difficult situation, which could seriously damage her reputation and erode much of her popularity."
"She will be expected to make public statements on the violence in Rakhine State," he said. "This is suchadifficult challenge that she might even call off her trip to Europe."
"The Rohingya are notaBurmese ethnic group," said Ko Ko Gyi,aleader of the now-disbanded 88 Students Generation activist group, who was recently given an amnesty after serving five years' imprisonment for defying the former military regime.
"The root cause of the violence… comes from across the border and foreign countries," he said.
"This is astonishing stuff coming fromasupposed human rights activist," said one Western observer. "Such statements goalong way to support the belief that the government is trying to manipulate opposition circles wherever it can in order to sabotage Aung San Suu Kyi." ·
Source:Burma riots:What the media isn't telling you. By Francis Wade
Several key elements of the spiraling sectarian violence in western Burma are not getting picked up on by media. There is of course an issue with verification, particularly inasituation like this where emotions can fuel propaganda, where communication is very difficult and where the conflict is so inflammatory. But nevertheless it's worth bringing them to the table.
This is even apparent among Burma's pro-democracy leaders, the so-called "forces for change" in the country. Prominent activist Ko Ko Gyi said that the presence of Rohingya,aMuslim ethnic minority which has born the brunt of the rioting, is "infringing on Burma's sovereignty". A friend told me today that he'd received an email fromaformer political prisoner stating that, "if western nations really believed in human rights, they would take the Rohingya from us."
The role of security forces in the violence has also been underreported, which contributes to statements like this one yesterday from an EU spokesperson: "We believe that the security forces are handling this difficult intercommunal violence in an appropriate way." That does not marry with reports from locals on the ground.
At least four people have told me that police are acting alongside Arakanese in torching homes of Muslims, while several reports have emerged of police opening fire on crowds of Muslims (NB: Muslims are forbidden from entering Burma's police force or army – this does carry significance when violence is of this nature). An NGO worker said last night that her family friend,aformer politician from Sittwe, has been killed after being arrested over the weekend, while AFP reports thataRohingya shot by Burmese police has died in Bangladesh.
There also seems to be something ofaPR campaign to cast Muslims as those behind the killings (to make clear, Muslim groups are not innocent bystanders, but have also been involved in arson attacks across the state). One such example is the shaving of the heads of dead victims, often Muslims, and dressing them in monks robes – "and they (media) will take photos of this fake monk corpse to show to the world that these dead bodies were murdered by Muslim [sic]", one source wrote.
In keeping with past instances of anti-Muslim fever in Burma, the internet has been awash with vitriol. A piece I published on Al Jazeera only yesterday has already attracted 150 comments – they'reapretty good window into how the debate runs. What is conspicuously absent in all this is any rational debate – indeed most comments, even from the veterans of unrest in Burma, do not tackle the unfolding crisis, but instead exploit it asameans to vent their own bigotry.
Posted: 15 Jun 2012 06:58 AM PDT
Source: FB of အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး
"The violence is clearly well orchestrated and not as spontaneous as we are being led to believe." "The answer is plain to see. The government is very worried about the support commanded by Suu Kyi. It wants to force her intoaposition where she has to makeapro-Rohingya public statement that could damage her popularity among Burma's Buddhists, where anti-Muslim sentiment runs high. On the other hand, if she remains silent she will disappoint those who support Source FB of her firm stand on human rights." — Burma expert and author Bertil Lintner
My comment:Mr. Bertil Lintner told me in KL 10 months ago that he believed that Bama Gov is planningaVERY TERRIBLE things on Rohingyas. He is right again. First was his prediction of Ne Win planning to start an anti-Muslim Riots in 1988, in the Bangkok newspapers,2andahalf month in advance. And he was right in writting that at last Buddhists and Muslims would unite and Ne Win will fall. He had also predicted the release of Daw Suu. (He told me that he got the insider information about Daw Suu)
Posted: 15 Jun 2012 08:46 AM PDT
Dua ekor beruang panda yang dipinjamkan kerajaan China kepada Malaysia seperti yang dilaporkan The Straits Times Singapura baru-baru ini rupanya masih belum mempunyai nama.
Seperti juga isu kucing, Najib Altantuya sekali lagi menunjukkan 'ketidak seriusannya' dalam soal pentadbiran negara tetapi lebih tertumpu dengan perkara yang remeh yang akhirnya mengundang ketawa seluruh dunia.
Sudahlah bakal menantunya buat perangai semalam, kunun untuk meredakan tekanan akibat terdesak mempertahankan Putrajaya, Najib Altantuya meminta rakan di Facebooknya supaya menamakan dua ekor beruang kunun sesuai dengan citarasa Malaysia.
Lalu berduyunlah 'rakannya' memberi cadangan seperti Altantuya dan sebagainya sebagai tanda 'prihatin' mereka kepada seruan pemimpin yang semakin hampir dengan Tribunal Grande de Instance di Paris atas dakwaan rasuah kapal selam Scorpene sepuluh tahun lalu! Tindakan Najib Altantuya yang mengalu-alukan orang ramai menamakan dua ekor panda yang dipinjam Malaysia daripada negara China akhirnya mengundang pelbagai reaksi lucu.
Dalam laman Facebook berbahasa Cinanya, Najib yang menggelar dirinya "Ah Jib Gor" (Abang Najib) berkata kedua-dua ekor binatang itu mewakili hubungan baik dengan republik itu."Spesis panda sudah hampir pupus, namun China bersetuju meminjamkannya kepada kita. Ini membuktikan China percayakan kita.
"(Panda) akan menjadi pengalaman pendidikan untuk rakyat Malaysia. Ia membenarkan kita memahami lebih banyak tentang binatang dan meningkatkan kesedaran kepada kerja-kerja perlindungan," tulis Najib. Bagaimanapun, mesej serius perdana menteri berakhir dengan komen berbentuk selaran banyak pihak yang beranggapan langkah itu hanya membazir.
Delegasi parti komunis China tiba di Malaysia untuk lawatan kerja
SEPANG - Anggota jawatankuasa tetap biro politik jawatankuasa pusat Parti Komunis China (CPC), He Guoqiang tiba di sini untuk lawatan kerja empat hari.
Ketibaan He, yang juga setiausaha suruhanjaya pusat bagi pemantauan disiplin CPC bersama anggota delegasinya, disambut Duta Besar China ke Malaysia Chai Xi dan Setiausaha Kerja Umno Datuk Ab Rauf Yusoh.
Ab Rauf berkata ketibaan He adalah atas jemputan kerajaan Malaysia dan Umno untuk memperkukuh hubungan kepimpinan antara kedua-dua parti dan negara.
"Malah peminjaman sepasang beruang panda dari kerajaan China juga adalah simbolik persahabatan antara kedua-dua negara," katanya kepada pemberita sebelum ketibaan He di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa KL di sini hari ini.
Sepanjang lawatan ke Malaysia, He dijadual membuat kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Selain itu beliau juga dijangka menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara China dan Malaysia untuk meminjam sepasang beruang panda yang akan ditempatkan di Taman Wetland di Putrajaya. - Bernama
PUTRAJAYA: "As Malaysia rolls out the red carpet for the pandas, it is hoped that China's panda diplomacy can also help ease political tensions in the country," said an online report in the Star.
But what seems to be harbingers of peace, looks more likely, if not already, fodder for more discontent in the country over the RM20 million spent to secure the two pandas ona10-year loan from China.
The report also stated that these pandas will "have to be kept in special enclosures being built at the wetlands park in Putrajaya."
However,avisit to the Putrajaya wetlands yesterday revealed something interesting. Whenastaff was asked about the encloure that is to be built for these pandas, the reply was: "No area has been designated or decided on yet, and construction hasn't started."
Six delegates from China together with representatives from Jabatan Perhilitan, the Natural Resources and Environment Ministry and FRIM toured the wetlands yesterday to determine the enclosure for the pandas.
That sum already has many quarters all hot and bothered. So much for easing political tensions in the country. The online report, however, was optimistic, saying "the returns in the form of gate collection, research and diplomacy, far outweighs the cost."
It makes one wonder how much the public will be charged to gawk at these pandas when they are ready for public viewing in five months time.
Currently, there is no fee to enter the park and you only pay for the rental of bicycles and kayaks and there isaRM5 per person fee forapersonal tour ofapark, foragroup of 10.
Make no mistake that the Putrajaya Wetlands is beautiful place. The grounds are carefully manicured, the surrounding structures absent of peeling paint, and the washrooms pristine.
There isawell-constructed 18-metre lookout point, shady picnic areas and well-thought out paths that will surely make leisure walking an experience.
Being as the only visitor yesterday, there wasasense of eerie calm. But the question to ask is how much good RM20 million could do for the zoos in our country, which any Malaysian will tell you is in need of serious cash and upgrades.
Putrajaya Wetlands Park in Putrajaya, is believed to be the largest constructed freshwater wetlands in the tropics. It houses the Wetlands Park (Taman Wetland) and the other Wetlands areas.
Its website states, "Taman Wetland is alsoawildlife sanctuary which attractsahuge variety of animals to the combined terrestrial-aquatic wetland environment. The park's lake is also home toapair of hippopotamus from Africa."
When asked if there are any animals at the wetlands,astaff member smiled sheepishly and said that there were none, justanature walk and wet park.
A drive around the park wasn't very helpful either as there were several roads that were cordoned off. -FMT
Pertama: Nama-nama yang dikemukakan oleh rakyat di dalam facebook itu menunjukkan rakyat semakin lama semakin meluat dengan Najib dan Rosmah. Itu kebenaran. Najib kena akur.
Kedua, belanja sampai RM20 juta hanya untuk mempastikan beruang panda yang dipinjam selama 10 tahun dari China.. itu kerja gila dan kata orang pantai timur: natang sungguh!
Ketiga: Sekarang tembelang UMNO terdedah: siapa buat hubungan kerjasama dengan komunis!
Anggota jawatankuasa tetap biro politik jawatankuasa pusat Parti Komunis China (CPC), He Guoqiang tiba di sini untuk lawatan kerja empat hari.
Begitulah keadaan Najib & UMNO sekarang. Dah terdesak sangat untuk dapatkan sokongan rakyat dari kaum Cina untuk PRU13 sehingga lakukan hal-hal bangang dan bodoh. Dia ingat masyarakat Cina di negara ini bodoh semacam dia. Kalau anda beri panda seorang seekor kepada orang Cina di Malaysia sekalipun, belum tentu anda akan dapat undi mereka!
GB dah katakan sebelum ini, Najib akan terus ditimpa "haramjadah" yang tak putus-putus ekoran dari keceluparannya mengharamjadahkan rakyatnya sendiri.
GB bukanlah tukang ramal, tetapi itulah hukum kebenaran dan keadilan: anda akan perolehi semula apa yang anda beri.
Hukum sunnatullah adalah hukum universal, hukum alam yang dicipta Allah swt untuk panduan kepada manusia.
Mudahnya begini: Jika anda tidak suka orang lain melakukan kepada anda, maka jangan lakukan hal itu terhadap orang lain.
Dan di dalam Islam Surah Al-Baqarah ayat 286 ada menyebut: laha kasabat wa 'alaiha maktasabat
Posted: 15 Jun 2012 06:14 AM PDT
And the first thing He said was: "Don't."
"Forbidden fruit? We got forbidden fruit? Hey, Eve ... we got forbidden fruit!"
But there is reassurance in this story. If you have persistently and lovingly tried to give them wisdom and they haven't taken it, don't be hard on yourself. If God had trouble handling children, what makes you think it would beapiece of cake for you?
Take two and keep away from the children.
Posted: 15 Jun 2012 05:33 AM PDT
Posted: 15 Jun 2012 05:05 AM PDT
Korean pop group Girls' Generation has unveiled two music videos for their 4th Japanese single, Paparazzi, which will be officially released on June 27 in Japan.
Girls' Generation (SNSD) Paparazzi from YeinJee's Asian Journal
Posted: 15 Jun 2012 06:08 AM PDT
Gambar: Keadaan mangsa setelah ditarik keluar anggota bomba
"Kami ambil masa kira-kira lima minit menarik keluar mangsa tersepit bawah kereta. Mangsa yang separuh sedar alami kecederaan di bahagian bahu dan dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah bagi rawatan susulan," katanya. -SH
Posted: 15 Jun 2012 04:39 AM PDT
Posted: 15 Jun 2012 04:32 AM PDT
Posted: 15 Jun 2012 03:57 AM PDT
Source: MMSY မီဒီယာက ခင်ဗျားတို့ကို ဘာတွေချ မပြဘူးလဲ
မြန်မာပြည်က လူထုအုံကြွမှု: မီဒီယာက ခင်ဗျားတို့ကို ဘာတွေချမပြဘူးလဲ
By Francis Wade Jun 12, 2012 သတင်းအရင်းအမြစ် –
မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေးပြဿနာများဟာ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားနေပါတယ်။ သော့ချက်ကျတဲ့ အချက်များကိုတော့ မီဒီယာတွေက စုစည်းဖော်ပြပေးခြင်းမရှိဘူး။ ၀ါဒဖြန့်မှုကို ပုဂ္ဂလခံစားချက်က မီးစာထိုးပေးနေတဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ(သတင်းတွေကို) မှန်မမှန်အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ကလည်း အရမ်းခက်ခဲနေသလို ပြဿနာကလည်း မီးဟုန်းဟုန်းတောက်သလို ကြီးထွားနေတာကြောင့်လဲ ပါပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအကြောင်းကို စားပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။
(မြန်မာပြည်က) လူတွေအနေနဲ့ သတင်းပေးဖြန့်ချိဖို့ ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ ဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံဆီမှာ ဆူဆူညံညံနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ ရှိနေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ရခိုင်များက တာဝန်ကြီးကြီးမားမား ယူပေးရမယ်။ [ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ရခိုင်များ)က မီဒီယာတွေဆီမှာ ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေကို ချပြနိုင်ခွင့်ပိုရနေတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ]
ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံတွင်းက အပြောင်းအလဲအင်အားများဆိုတဲ့ လူတွေဆီမှာတောင် ထင်သာမြင်သာဖြစ်နေပါပြီ။ ထင်ရှားတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုကိုကြီးက မွတ်စလင်မ်လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့တွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက သူအီးမေးလ်တစ်စောင်ရကြောင်း၊ အဲဒီမေးလ်မှာ အရင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတစ်ဦးက "အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ယုံကြည်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လာခေါ်သွားကြပါတော့လားဗျာ" လို့ ရေးသားထားပါတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဒီပြဿနာမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အီးယူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ကတော့ မနေ့က ကြေငြာချက်မှာ အခုလိုပြောသွားပါတယ်။ "လုံခြုံရေးအင်အားတွေက ဒီခက်ခဲတဲ့လူမျိုးရေးပြဿနာကြီးကို သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။" ။ ဒါပေမယ့် ဒီယုံကြည်ချက်ကတော့ ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းသတင်းများရဲ့ လက်တွေ့မျက်နှာပြင်မှာတော့ အစပ်အဟပ်မတည့်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ကို အနည်းဆုံးလူလေးဦးက ဒီလိုသတင်းပေးပါတယ်။ ရဲတွေက ရခိုင်တွေ မွတ်စလင်အိမ်များကို မီးရှို့တဲ့အခါ ဘေးကနေ ရံပေးပြီး လိုက်ပါနေကြတယ်လို့ပါ။ တခြားသတင်းတော်တော်များများမှာလည်း ရဲတွေက မွတ်စလင်လူအုပ်များကို တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ ဆိုတာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရမှာက မြန်မာ စစ်တပ်သို့မဟုတ် ရဲတပ်တွေထဲမှာ မွတ်စလင်မ်များတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိပါ။ ဒီလိုသဘာဝမျိုးဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာမှာ ဒီ(အမှုထမ်းခွင့်မရတဲ့ကိစ္စ)ကလည်း အရေးပါမှုတစ်ခုပါပဲ။) အင်ဂျီအိုဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မနေ့ညက သူ့မိသားစုလိုဖြစ်နေတဲ့ အရင်ကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ သူငယ်ချင်းကို ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ဖမ်းဆီးထားပြီး အခုသတ်ပြစ်လိုက်ကြပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှမှာ ရိုဟင်ဂျာတစ်ယောက် မြန်မာရဲဘက်က ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးပြီဆိုပြီး အေဖက်ဖ်ပီက တင်ပြထားပါတယ်။
ကုလအနေနဲ့ကလည်း ဒီပြဿနာရပ်မှာ ထင်ရှားတဲ့မေးခွန်းထုတ်လောက်ဖွယ် ရာဇ၀တ်မှုမျိုးကို နိုင်ငံတော်ဘက်က သူတွေကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခြင်းမျိုး တွေ့မှတစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။ တကယ့်တမ်းတော့ ကွင်းဆင်းနေတဲ့ ဂျာနယ်လစ်နည်းနည်းပါးပါးလေး ဒါမှမဟုတ် စိစစ်လေ့လာနေသူနည်းနည်းလေးလောက်နဲ့တော့ ဒီလိုလူသေမှုတွေမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိနေလဲဆိုတာ ထောက်ပြဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ ခုထိတော့ ရာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ကုလကလည်း ဒီဒေသက တာဝန်ခံတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကတော့ စိစစ်လေ့လာသူများကို နိုင်ငံတွင်းပေးဝင်ဖို့ တောင်းဆိုနေပါပြီ။
မွတ်စလင်မ်တွေကို ဒီလူသတ်မှုများမှာ နောက်ကွယ်က တာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး လူထူစစ်ဆင်ရေး (PR campaign) တစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ ထင်ရတာပဲ။ [ဆိုလိုတာက (အဲဒီ စစ်ဆင်ရေးဟာ) မွတ်စလင်မ်အုပ်စုတွေက ရပ်ကြည့်နေပေမယ့် အပြစ်မကင်းသူတွေဖြစ်တယ်၊ပြည်နယ်တ၀ှမ်းက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများမှာ ပါဝင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေဖို့ပါ။] ဥပမာတစ်ခုကတော့ မွတ်စလင်မ်လူသေအလောင်းကို ခေါင်းရိတ်ပေးတယ်၊ သင်္ကန်းဆင်ပေးပြီး ဘုန်းကြီးပုံစံ ဖန်တီးပေးနေခြင်းများပါပဲ။ "သူတို့မီဒီယာတွေက ဒီလုပ်ကြံပုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဘုန်းကြီးအလောင်းတွေ၊ သူတို့ကို မွတ်စလင်မ်တွေကသတ်တာဆိုပြီး ကမ္ဘာကိုပြသပါလိမ့်မယ်" လို့ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ အန္တီမွတ်စလင်မ်အဖျားဝေဒနာအရ ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ကြီးဟာ ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုတွေ ခါးသီးမှုတွေနဲ့ လျှော်ဖွတ်ခံနေရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်မနေ့က ရေးသားခဲ့တဲ့ အလ်ဂျဇီးယားက ဆောင်းပါးမှာတင် မှတ်ချက်ကွန်မန့်ပေါင်း ၁၅၀ ရှိနေပါပြီ။ ဒါက အငြင်းအခုန်က ဘယ်လိုတာသွားနေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ် သတ်ပြီး ကောင်းမွန်လှတဲ့ ပြတင်းလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံနည်းနာများ၊ အချက်အလက်များကို အခြေခံတဲ့ အငြင်းအခုန်မျိုး မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးဝထင်ရှားနေပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးသူများထဲမှာ မြန်မာပြည်က အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြင်လည်ဖူးသူတွေ ပါနေတာတောင် မှတ်ချက်အများစုကတော့ ကွယ်ဝှက်နေတဲ့ပြဿနာရပ်ကို ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြည်မထုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတကို ဖော်ပြနေသလိုပါပဲ။
SOURCE: MMSY ပဉ္စသိင်္ခ့ စောင်းကြိုးပြတ် (အပိုင်း ၁ ) By ဒန်ငြာရှိန်း
ပဉ္စသိင်္ခ့ စောင်းကြိုးပြတ်ဆိုလို့ ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုလို့တော့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တော်ကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့၊ ဖြစ်ပျက်ဆဲ ပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံတကာသတင်းများအပေါ်အခြေ ခံ သုံးသပ်တင်ပြချက်သာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်က အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ဇီဝိန်တော် တော်များများ ကြွေပျက်ခဲ့ရပါပြီ။ နှစ်ဖက်စလုံး နစ်နာဆုံးရှုံး တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ လူအများကတော့ သူတို့ရဲ့ အသိဥာဏ်က ထုတ်ပေးနေတဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစွမ်းကိုတောင် အသုံးမချနိုင်ကြတော့ပါ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကို လုံးဝအခြေခံတင်ပြသွားမှာမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပြည်တွင်း မီဒီယာများရဲ့ တင်ပြမှုများကို မြန်မာပရိသတ်ကြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖတ်ရှုနေရတာကြောင့် အဲဒီမီဒီယာတွေကို အခြေခံသုံးသပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ မယူဆလို့ပါ။
Recall with humility, then, that conflicts between Buddhist and Muslims killed several innocents and destroyed more than thousand of worshiping places. Hence, enough of misinformation and discrimination. Muslims and Buddhists must actively work together to achieve what both peoples want — peace.
ဒီစာသားတွေကိုတော့ ဘလော့တစ်ခုမှာ မကွေးနဲ့ ဖားကန့်တို့က ဗလီတွေကို ဖျက်ဆီးကြတော့ ရေးသားထားတဲ့ သတိပေးချက်ပါ။ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အတူလက်တွဲဆောင် ရွက် ရမယ်လို့ နှိုးဆော်ထားတာပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြ သုံးသပ်ချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး ပြင်ဆင်သင့် တာကို ပြင်ကြကာ အကောင်အထည်ဖော်ပြကြပါစို့။ မဇ္စျိမဒေသ သို့ …။
မှန်မှန်ကန်ကန်သွားရင်းဒို့ လမ်းမှားထဲ ရောက်ခဲ့တော့
အခု ကျွန်တော်တို့ သတင်းတွေဆီ လှမ်းကြည့်ကြရအောင်။
အခုပထမဆုံး Australian National University ရဲ့အေရှပစိဖိတ်လေ့လာရေးဌာန ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုက ပီအိပ်ခ်ျဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားမှုပါ။ ဆောင်းပါးကိုလ့လာရင်တော့ ဆွဲထုတ်ပြဖို့သင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်က -
မြန်မာပြန် – ကုလားအားလုံးကိုသတ်ပြစ်ဆိုတဲ့ လူသတ်ဘာသာစကားကိုသုံးပြီး ပုဂ္ဂလိက တင်ပြတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာရော မှတ်ချက်ပေးမှုတွေမှာပါ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ စကားတွေ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်တဲ့စကားတွေကိုသုံးပြီး တဖက်သားထိခိုက်အောင် ဖြန့်ချိနေမှုများကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပဲ တွေ့နေရပါတယ်။ တင်ပြဖို့ မသင့်တော်ဆုံးဖြစ် ပေမယ့်လည်း ဥပမာနှစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
-ီးကုလား၊ -ါ -ိုး မ -ားကုလား၊ ခွေးကုလား၊ ၀က်ကုလား မေ- -ိုးကုလား၊ ကိုယ့်သားသမီးကိုယ်ပြန်ပြီး -ိုး တဲ့ကုလား
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖော်ပြပါဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ကို မတင်ပြချင်ပါ။
ဒါကြောင့် အေရှပစိဖိတ်လေ့လာရေးဌာန ရဲ့တာဝန်ယူတင်ဆက်သူဖြစ်ပြီး ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ neutral နေရာကနေ ပါဝင်နိုင်တဲ့ Nicholas Farrelly ရဲ့ "Intolerance, Islam and the Internet in Burma today" မှာ ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို သုံးသပ်ပါမယ်။
Nicholas ရဲ့မှတ်ချက်မှာ ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
It appears likely that this episode of political conflict will have all sorts of implications — both practical and rhetorical, but also for analysts and academics.
With that in mind this AFP report is likely to prove relevant. It provides some sense of how outside observers conceive of the online rhetoric associated with western Burma's political conflict.
မြန်မာပြန် – ဒီလိုနိုင်ငံရေးပြဿနာများမှာတော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ စကားသံတွေ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေနဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တွေ ပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒိအချက်ကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး ဒီအေဖက်ပီက တင်ပြမှုကို ဆီလျော်အပ်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ သက်သေ ပြနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် အနောက်ဘက်က နိုင်ငံရေးပြဿနာအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က စကားသံတွေကို အပြင်ဘက်က စောင့်ကြည့်နေသူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုသိမြင်နေကြသလိုဆိုတာ အဲဒီဆောင်းပါးက ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
ကဲ – ဒီလိုဆို သြစီနေရှင်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Nicholas ရည်ညွှန်းတဲ့ ဆောင်းပါးဆီ သွားကြရအောင်။ ဖော်ပြထားတာက -
…….. incendiary posts on social media sites reflecting deep-rooted hostilities in the region, experts said.
မြန်မာပြန် – ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်က မီးစထိုးပေးတဲ့ ပို့စ်တွေကနေ ဒေသတွင်း ရန်လိုမှုတွေဆီ အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိနေ တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာလည်း Nicholas က ဒီလိုဆိုထားပြန်ပါတယ်။
"Recent events in western Burma have createdahurricane of hate in the online sphere," Nicholas Farrelly,aresearch fellow at the Australian National University, told AFP. "Tragically, contested accounts of the clashes provide fuel for hardliners on both sides."
မြန်မာပြန် – မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းမှာ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ အွန်လိုင်းမှာ အမုန်းတရားဟာရီကိန်းကြီးကို ဖန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုနေကြတာတွေကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ခက်ထန်သူတွေအ တွက် လောင်စာတွေကို ထုတ်ပေးနေပါတယ်။
ဆောင်းပါးကို ဆက်လက်လေ့လာရင်တွေ့ရတာက -
One Facebook page called the "Kalar beheading gang", which has over 500 'likes', has an illustration ofagrim reaper with an Islamic symbol on its robe onablood-spattered background and explicit images purporting to be of victims of the unrest.
"In order to cleanse our religious land, sometimes we have to bloody our hands," readamessage on Blink's website, according to the DVB, which said it "can be translated asathreat aimed at the area's Muslim minority".
မြန်မာပြန် – ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "ကုလားခေါင်းဖြတ်ဂိုဏ်း" ကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်သူအရေအတွက် ၅၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာရဲ့ နောက်ခံပုံကတော့ အစ္စလာမ်မစ်အမှတ်အသားပါ ၀တ်ရုံဆင်မြန်းထားတဲ့ မရဏမင်းပုံ ဖြစ်ပြီး အဲဒီပုံကလည်း သွေးစွန်းနေပါတယ်။ ဒီပြဿနာထဲက ဓားစာခံနေရသူများပမာ လိမ်လည်တင်ပြထား တဲ့ ထင်ရှားသောပုံများလည်းရှိနေပါတယ်။
နော်ဝေမှာအခြေစိုက်တဲ့ ဒီဗွီဘီကတော့ အင်္ဂါနေ့က သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ) တိုက်ခိုက်ခံရ ကြောင်း သတင်းတင်ပြလာပါ တယ်။ တိုက်ခိုက်သူများကတော့ ရုရှနဲ့စင်ကာပူတို့ကဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီဗွီဘီအရသိရတာက "မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာမြေကို သန့်ရှင်းဖို့ , ငါတို့ လက်တွေ တခါတလေ သွေးစွန်းသင့်တယ်။" ဆိုပြီး Blink ဟက်ကာများရဲ့ဆိုဒ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါဟာ မွတ်စလင်မ်လူနည်းစုများသာရှိတဲ့ဧရိယာတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
"The Burmese public are believing one side of the story, which is that Rohingya are not Burmese, are not citizens and are just Bengali settlers trying to take their land," said Phil Robertson, of New York-based Human Rights Watch.
Social media provided "frankly chilling racist diatribe inciting violence," he added. "It isarecipe for disaster.
မြန်မာပြန် – နယူးယောက် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ဖီးလ်ရောဘတ်ဆင်ကတော့ ဒီလိုပြောပါတယ်။ "မြန်မာပြည်သူတွေ ကတော့ တဘက်သတ်တင်ပြ မှုတွေကိုပဲ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး၊ ဘင်္ဂါလီတွေဖြစ်ပြီး ငါတို့ရဲ့မြေတွေ ကို မောင်ပိုင်စီးဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေဖြစ်တယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ ဖော်ပြနေကြတဲ့ (မှတ်ချက်များက) ဆူပူမှုပြဿနာထဲကိုသွတ်သွင်းနေတဲ့ ပွင့်လင်းထင်ရှားပြီး နွေးထွေးမှုမရှိသော ခါးခါးသီးသီးရန်လိုနေတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများပါပဲ၊ ဒါကတော့ ဒုက္ခသုက္ခများအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။"
ယခုတဖန် အလ်-ဂျဇီးရားတင်ပြချက်ကို လေ့လာကြပါတယ်။ အလ်ဂျဇီးယားက ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အလွတ်သတင်းထောက် Francis Wade ရဲ့ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ "Islamophobia and the fear of 'the other' in Myanmar" ၊ "မြန်မာနိုင်ငံထဲက အစ္စလာမ်မိုဖိုးဘီးယား၊ အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါနှင့် တပါးသူကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ" ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။"
အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာပဲ ထုတ်နုတ်ပြထားတဲ့ အရေးကြီးအချက်တစ်ချက်ကတော့ -
Myanmar's Muslims enjoy none of the educational or international prestige that is widely associated with the country's Christian minorities…..While Kachin and Karen Christians have suffered atrocious treatment I think there is at least some mainstream Myanmar Buddhist respect for their cultures and religion. Such respect is rarely accorded to Muslims.
မြန်မာပြန် – မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်းက ခရစ်ယာန်လူနည်းစုများနည်းတူ ပညာရေးဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာဂုဏ်သိမ်တွေ တစ်ခုကိုမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခံစားခွင့်မရှိပါဘူး။ …… ကချင်နဲ့ ကရင်ခရစ်ယာန်များဟာ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေ ရရှိနေပေမယ့်လည်း တချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူထုက သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတွေကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ကို လေးစားကြပါသေးတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုလေးစားမှုမျိုးကတော့ မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် ရှားမှရှားပါပဲ။ (သြစီနေရှင်နယ်တက္ကသိုလ်မှ အရှေ့တောင် အာရှအရေးကျွမ်းကျင်သူ Nicholas Farrelly ရဲ့ မှတ်ချက်ကိုပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြထားတာပါ။)
အလ်ဂျဇီးရားရဲ့ဆောင်းပါးပါ "The Other" ၊ တပါးသူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်မှာတော့ ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
Treatment of Muslims as the 'other' persists despite the country's push to embrace the outside world and everything it offers. There is something ofacontradiction then in the population's desire to become global players, which will see it interacting far more with non-Myanmar, non-Buddhist ethnicities. In Arakan state, where tension between Buddhists and Muslims often spills over into violence, hypocrisy is also evident in attempts by Arakanese to goad public opinion against the Rohingya in the name of "nationalism". ….
မြန်မာပြန် – နိုင်ငံကတော့ အပြင်ကမ္ဘာကို ထိစပ်နမ်းရှုပ်ဖို့နဲ့ အဲဒီအပြင်ကမ္ဘာက ကမ်းလှမ်းသမျှ လက်ခံဖို့ တွန်းအားပေး (လုပ်ဆောင်နေပေမယ့်) မွတ်စလင်မ်များကို "တပါးသူ" များအဖြစ် ဆက်ဆံနေကြတုန်းပါ။ ပြည်သူလူထုက ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ရင်ပေါင်တန်းလိုနေကြပေမယ့်လည်း တစ်ခုခုကတော့ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မနေပါဘူး။ အဲဒါ(လိုက်လျော ညီထွေရှိမနေတဲ့အချက်) ကိုတော့ ဗမာမဟုတ်သူများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူများကို (သူတို့ရဲ့) တုန့်ပြန်နေမှုများမှာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်မ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာပြဿနာများကနေ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုဖြစ်ပွားနေ တဲ့နေရာမှာ ရခိုင်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုတာ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ လူထုအမြင်ကို မရအရ တဇွတ်ထိုးယူနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာ တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ လံကြုတ်ဇတ်လမ်းတွေဆင်နေတာဆိုတာ သက်သေတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အခု အလ်ဂျဇီးရားရဲ့အခြားသတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုကို ဆက်လက်သုံးသပ်ပါမယ်။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ "Top UN envoy in unrest-hit western Myanmar" ၊ "ကုလထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ မအေးမချမ်းဖြစ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရောက်ရှိဆိုပြီး" ဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 15 Jun 2012 03:46 AM PDT
Source: MMSY ရခိုင်ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကို ပြေလည်အောင် နည်းလမ်းရှာဖို့ အတွက် ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံ သွားရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လျှောက်ထားကြပါတယ်။
ဒီနောက် အစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘာသာပေါင်းစုံ စည်းလုံးချစ်ကြည်ရေးအသင်း (ဟိန္ဒူ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်း) နဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲကြောင့် အောင်မြင်မှုတချို့ ရရှိခဲ့တယ်လို့ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်တဲ့ မြန်မာ-မွတ်စလင် အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ခင် က ပြောပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရောက်နေတဲ့ ဦးကျော်ခင်က "ကျနော်တို့က တဘက်က သုံးပွင့်ဆိုင်ပေါ့၊ ရန်ကုန်မှာ လုပ်သလိုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မနေ့က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကကို လျှောက်တယ်။ တဘက်က ရခိုင်အမျိုးသားများကို ခေါ်တယ်။ တဘက်က အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးတော့ သံသယတွေက နည်းနည်းလေး ပြေသွားတယ်။ အဓိကဖြစ်တာက လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် သံသယဖြစ်တယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲလိုမျိုး စစ်တွေမှာလည်း ဆက်လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"လောလောဆယ် မောင်းတောကို သွားပါတယ်။ ကျနော်တို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစုရှိတဲ့အတွက် ဒေသခံများကို ရှင်းပြပါတယ်။ ရှင်းပြပြီးတော့ ဒီအစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ဖို့ အတွက်ကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ စစ်တွေမှာ ဒါကိုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။" ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်း အဖွဲ့တွေ စုပေါင်းပြီး သိန်း ၂၃၀၀ အလှူငွေ ထည့်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုိပါတယ်။
"အတိဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ကို ကျနော်တို့ သာသနာ့နုဂ္ဂဟအသင်းကနေ သိန်း ၁၀၀၀ အလှူငွေထည့်ပါတယ်။ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အသင်းကနေ သိန်း ၁၀၀၀ ထည့်တယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားများ အသင်းကနေ သိန်း ၃၀၀ ထည့်ပါတယ်။ အာလုံး သိန်း ၂၃၀၀ ရပါတယ်။ အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဒါကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။"
Posted: 15 Jun 2012 03:45 AM PDT
Bill Gates thanked all the candidates for coming and asking those who do not know JAVA programming to leave. 2000 people left the room. Soma says to himself, 'I do not know JAVA but I have nothing to lose if I stay. I'll give itatry' Bill Gates asked the candidates who never had experience of managing more than 100 people to leave. 2000 people leave the room..
Soma says to himself ' I never managed anybody by myself but I have nothing to lose if I stay. What can happen to me?' So he stays.
Soma says to himself, 'I left school at 15 but what have I got to lose?' So he stays in the room.
Lastly, Bill Gates asked the candidates who do not speak Serbo – Croat to leave. 498 people leave the room. Soma says to himself, ' I do not speak one word of Serbo – Croat but what do I have to lose?' So he stays and finds himself with one other candidate. Everyone else has gone.Bill Gates joined them and said 'Apparently you are the only two
speak Serbo – Croat, so I'd now like to hear you haveaconversation together
in that language.'
Calmly, Soma turns to the other candidate and says in Sinhalese ` Kohomada Machang? (translate: "How Are you buddy?")
The other candidate answers in Sinhalese ' Ammata Hudu……….umbath Lankavenda?? ("my God, are you also from Sri Lanka?")